ဘာပေရဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေက ရပ်တန့်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး
စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုကို ထပ်မံ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြန်တဲ့ ဘာပေ Mbappe
12 Oct 2018 . 5:03 PM
ပြင်သစ်လူငယ် ကြယ်ပွင့်ကစားသမား ဘာပေ Mbappe ကတော့ စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရယူနေတော့တာပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းက ပြင်သစ်အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြပြီး ချန်ပီယံဆု ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ဘာပေဟာ အခုဆိုရင် အသက်(၂၀)မတိုင်ခင် နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုး (၁၀)ဂိုးပြည့်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့က အိုက်စလန်နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ခြေစမ်းပွဲမှာ ပြင်သစ်အသင်း (၂)ဂိုးပြတ်အရေးနိမ့်နေချိန် ဒက်ချမ့်စ် Deschamps က ဘာပေကို လူစားဝင်ကစားစေခဲ့တယ်။ ဘာပေ ၀င်လာတဲ့အချိန်မှာ ပြင်သစ်အသင်း တိုက်စစ်က ပိုကောင်းလာခဲ့ပြီး ပထမချေပဂိုးက သူ့ကြောင့် ရခဲ့တာဖြစ်သလို ဒုတိယချေပဂိုးကိုလည်း ပယ်နယ်တီကနေ သွင်းယူခဲ့တယ်။
ဒါဟာ ဘာပေအတွက် လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘ၀ (၁၀)ဂိုးမြောက်ဖြစ်ပြီး ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် အသက်(၂၀)မပြည့်ခင် အဲဒီဂိုးအရေအတွက် သွင်းယူခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင် ဘာပေဟာ နိုင်ငံအသင်းအတွက် (၁၀)ဂိုး၊ ကလပ်အသင်းကစားသမားဘ၀မှာ (၅၈)ဂိုးအထိ သွင်းယူထားပြီး လက်ရှိကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားတွေဖြစ်တဲ့ မက်ဆီ Messi ၊ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo တို့တောင် ဘာပေ အသက်အရွယ်မှာ အဲဒီလို မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အသက်(၁၉)နှစ်အရွယ်မှာ မက်ဆီရဲ့ နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုးက (၄)ဂိုး၊ ကလပ်အသင်းအတွက် သွင်းဂိုး (၂၅)ဂိုးသာ ရှိခဲ့သလို စီရော်နယ်လ်ဒိုကလည်း နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုး (၇)ဂိုး၊ ကလပ်အသင်းသွင်းဂိုး (၁၇)ဂိုးသာ သွင်းယူခဲ့တာပါ။ နောက်ပြီး မက်ဆီ၊ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ မရဖူးတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကိုလည်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့် မက်ဆီ၊ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ ခေတ်လွန် ဘောလုံးလောကမှာ Super star ဖြစ်လာမယ့်သူက ဘာပေများ ဖြစ်နေမလားဆိုတာက . . .
– ပြင်သစ်လီဂူးမှာ အွန်နရီ Henry တင်ခဲ့တဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး ကစားသမား(၂၁နှစ်) မှတ်တမ်းကို (၁၆)နှစ်၊ (၃၄၇)ရက်နဲ့ ချိုးဖြတ်ခဲ့။
– အသက်(၁၇)နှစ်၊ (၆၂)ရက်နဲ့ ဂိုးသွင်းခဲ့လို့ မိုနာကိုအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် အသက်အငယ်ဆုံး ဂိုးသွင်းသူဖြစ်ခဲ့။
– ပြင်သစ်လိဂ်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဟက်ထရစ်သွင်းခဲ့ပြီး ဆိုနီအန်ဒါဆန် Sonny Anderson (၁၉၉၇)နောက်ပိုင်း အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုံး ဟက်ထရစ်သွင်းတဲ့ မိုနာကို ကစားသမားဖြစ်ခဲ့။
– ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ မန်နက်ဇ် Ménez ဟက်ထရစ်သွင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ပြင်သစ်လီဂူးမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ဟက်ထရစ် သွင်းသူဖြစ်ခဲ့။
– ဘန်ဇီမာ Benzema နောက်ပိုင်း ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက် အသက်အငယ်ဆုံး ပြင်သစ်ကစားသမားဖြစ်ခဲ့။
– ဆယ်ကျော်သက် ကစားသမားထဲမှာ ပြောင်းရွှေ့ကြေးအမြင့်ဆုံး၊ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ ဒုတိယမောက် ပြောင်းရွှေ့ကြေးအမြင့်ဆုံး ကစားသမားဖြစ်နေ။
– ပြင်သစ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ဂိုးသွင်းသူဖြစ်ခဲ့။
– ပီလီ Pele နောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက် အသက်အငယ်ဆုံး ကစားသမားဖြစ်ခဲ့။
စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတဈခုကို ထပျမံ ပိုငျဆိုငျခဲ့ပွနျတဲ့ ဘာပေ Mbappe
ပွငျသဈလူငယျ ကွယျပှငျ့ကစားသမား ဘာပေ Mbappe ကတော့ စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတှေ တဈခုပွီးတဈခု ရယူနတေော့တာပဲ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတုနျးက ပွငျသဈအသငျးအတှကျ ခွစှေမျးပွပွီး ခနျြပီယံဆု ဆှတျခူးခဲ့တဲ့ ဘာပဟော အခုဆိုရငျ အသကျ(၂၀)မတိုငျခငျ နိုငျငံတကာသှငျးဂိုး (၁၀)ဂိုးပွညျ့ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးစိုကျထူနိုငျခဲ့ပွနျပါပွီ။ ပွီးခဲ့တဲ့ကွာသပတေးနကေ့ အိုကျစလနျနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ခွစေမျးပှဲမှာ ပွငျသဈအသငျး (၂)ဂိုးပွတျအရေးနိမျ့နခြေိနျ ဒကျခမျြ့ဈ Deschamps က ဘာပကေို လူစားဝငျကစားစခေဲ့တယျ။ ဘာပေ ဝငျလာတဲ့အခြိနျမှာ ပွငျသဈအသငျး တိုကျစဈက ပိုကောငျးလာခဲ့ပွီး ပထမခပြေဂိုးက သူ့ကွောငျ့ ရခဲ့တာဖွဈသလို ဒုတိယခပြေဂိုးကိုလညျး ပယျနယျတီကနေ သှငျးယူခဲ့တယျ။
ဒါဟာ ဘာပအေတှကျ လကျရှေးစငျကစားသမားဘ၀ (၁၀)ဂိုးမွောကျဖွဈပွီး ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ အသကျ(၂၀)မပွညျ့ခငျ အဲဒီဂိုးအရအေတှကျ သှငျးယူခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားအဖွဈ စံခြိနျတငျခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရငျ ဘာပဟော နိုငျငံအသငျးအတှကျ (၁၀)ဂိုး၊ ကလပျအသငျးကစားသမားဘဝမှာ (၅၈)ဂိုးအထိ သှငျးယူထားပွီး လကျရှိကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ဘောလုံးသမားတှဖွေဈတဲ့ မကျဆီ Messi ၊ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo တို့တောငျ ဘာပေ အသကျအရှယျမှာ အဲဒီလို မစှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ဘူး။ အသကျ(၁၉)နှဈအရှယျမှာ မကျဆီရဲ့ နိုငျငံတကာသှငျးဂိုးက (၄)ဂိုး၊ ကလပျအသငျးအတှကျ သှငျးဂိုး (၂၅)ဂိုးသာ ရှိခဲ့သလို စီရျောနယျလျဒိုကလညျး နိုငျငံတကာသှငျးဂိုး (၇)ဂိုး၊ ကလပျအသငျးသှငျးဂိုး (၁၇)ဂိုးသာ သှငျးယူခဲ့တာပါ။ နောကျပွီး မကျဆီ၊ စီရျောနယျလျဒိုတို့ မရဖူးတဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကိုလညျး ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပါပွီ။ ဒါကွောငျ့ မကျဆီ၊ စီရျောနယျလျဒိုတို့ ခတျေလှနျ ဘောလုံးလောကမှာ Super star ဖွဈလာမယျ့သူက ဘာပမြေား ဖွဈနမေလားဆိုတာက . . .
– ပွငျသဈလီဂူးမှာ အှနျနရီ Henry တငျခဲ့တဲ့ အသကျအငယျဆုံး ကစားသမား(၂၁နှဈ) မှတျတမျးကို (၁၆)နှဈ၊ (၃၄၇)ရကျနဲ့ ခြိုးဖွတျခဲ့။
– အသကျ(၁၇)နှဈ၊ (၆၂)ရကျနဲ့ ဂိုးသှငျးခဲ့လို့ မိုနာကိုအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ အသကျအငယျဆုံး ဂိုးသှငျးသူဖွဈခဲ့။
– ပွငျသဈလိဂျဖလားပွိုငျပှဲမှာ ဟကျထရဈသှငျးခဲ့ပွီး ဆိုနီအနျဒါဆနျ Sonny Anderson (၁၉၉၇)နောကျပိုငျး အဲဒီပွိုငျပှဲမှာ ပထမဆုံး ဟကျထရဈသှငျးတဲ့ မိုနာကို ကစားသမားဖွဈခဲ့။
– ၂၀၀၅ ခုနှဈမှာ မနျနကျဇျ Ménez ဟကျထရဈသှငျးခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး ပွငျသဈလီဂူးမှာ အသကျအငယျဆုံး ဟကျထရဈ သှငျးသူဖွဈခဲ့။
– ဘနျဇီမာ Benzema နောကျပိုငျး ခနျြပီယံလိဂျမှာ ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ ဒုတိယမွောကျ အသကျအငယျဆုံး ပွငျသဈကစားသမားဖွဈခဲ့။
– ဆယျကြျောသကျ ကစားသမားထဲမှာ ပွောငျးရှကွေ့ေးအမွငျ့ဆုံး၊ ကမ်ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ ဒုတိယမောကျ ပွောငျးရှကွေ့ေးအမွငျ့ဆုံး ကစားသမားဖွဈနေ။
– ပွငျသဈအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ အသကျအငယျဆုံး ဂိုးသှငျးသူဖွဈခဲ့။
– ပီလီ Pele နောကျပိုငျး ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲမှာ ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ ဒုတိယမွောကျ အသကျအငယျဆုံး ကစားသမားဖွဈခဲ့။